युगसम्बाद साप्ताहिक - अब त अति भैसक्यो, जनतालाई गरिखान देऊ - महेश्वर शर्मा
Thursday, 05.28.2020, 03:30am (GMT+5.5) Home Contact
अब त अति भैसक्यो, जनतालाई गरिखान देऊ - महेश्वर शर्मा
Monday, 10.01.2012, 08:07pm (GMT+5.5)
सत्ताकै लुछाचुँडीमा सहमतिको लोहोरो पाकेन । अस्तिसम्म कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन मञ्जुर प्रचण्ड अहिले कांग्रेसलाई लोप्पा देखाउन थाले गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाइदिन्छौं भनेर संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको थाङनो ओढाएर घोप्टामुख पारेजस्तै । त्यो थाङ्नो भिरेपछि ‘घर न घाट’ भनेजस्तो स्थिति छ । आफूले भनेको नमाने सरकार बनाउन नदिने भनेर प्रचण्डले धम्की दिएपछि सुशील कोइरालाले सरकार बनाउन पाउँ भनेर बिन्ति चढाएका छन् । त्यसको पुष्ट्याइमा उनले निष्पक्ष चुनाव गराउनसक्ने क्षमता भएको कांग्रेसको विगतको यथार्थ देखाएका छन् । त्यसमा उनले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तर्घात गरे पनि प्रचण्डलाई नगरेको, बरु प्रचण्डकै अन्तर्घात सहेर गिरिजाप्रसाद छटपटाएको तथ्य पनि खुलाएका छन् । यो सबै विन्ति बिसाउन पहिले नै प्रचण्डका सवारी मन्त्री कहलिएका सिटौलालाई चाकडीका लागि खटाएको भनिंदैछ ।
आफैंले सरकार बनाउन नपाए चुनाव जितिंदैन भन्ने तत्वबोध भएका सबै दलका नेताहरु आफैंले चुनाव गराउन चाहन्छन् । जनतामा विश्वास नभएपछि कल–बल–छल, मनी–मसल जसरी हुन्छ चुनाव जित्नुपर्ने वाध्यता सम्झन्छन् । यो स्थितिमा सरकार बन्ने नबन्ने पक्ष बेग्लै छ, तर चुनाव नै गर्ने हो भने पहिले जस्तो नेताका हरुवा–चरुवा, गोठाला, खेताला र प्रेमी–प्रेमीकालाई (समानुपातिक भनेर) जागीर खुवाउने हिसावबाट नभएर संसदकै चुनाव गराउनुपर्छ । समानुपातिकले जनाधिकारको हनन् गर्छ । चुनावको अर्थ जनताको अभिमत लिनु हो । समानुपातिकमा जनताको अभिमत हुँदैन । त्यो नेताको स्वेच्छाचारिता मात्रै हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष चुनेको मात्रै जनप्रतिनिधि मानिन्छ । विगत (मृत) संविधानसभा जस्तो भेडियाधसान अब पनि हुने हो भने दुर्भाग्य नै हुन्छ ।
अहिले देशमा चार पाँच महिनादेखि कामचलाउ सरकार छ । यसको अर्थ अर्को सरकार नबनुन्जेल अल्प अवधिका लागि सामान्य दैनिक कार्य संचालन गर्ने मात्र काम हुन्छ । यस्तो सरकारले देश–विदेश घुम्ने, सन्धि सम्झौता गर्ने, योजना शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने, यो र त्यो गरिदिन्छु भनेर प्रचारवाजी गर्ने, पैसा बाँड्दै हिंड्ने कार्य गर्न पाउँदैन । तर यहाँ मनपरी चलेको छ । मनपरी कर्मचारी सरुवा र नियुक्ति भैरहेका छन्, पदोन्नति र पुरस्कार बाँडिदैछन् । केका लागि ? स्पष्ट छ– आफ्नै पार्टी प्रचारका लागि । अहिले सरकारले आँखा चिम्लेर गैरकानुनी काम गरिरहेको छ । यस्तोमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको अभिमत छ । तर कसले गर्ने ? राष्ट्रपति मुकदर्शक छन । न संविधान छ, त कानुन छ । यस्तो अराजक स्थिति व्यहोर्न जनता बाध्य छन् ।
कानुन नमान्नेमा मन्त्री र सांसद नै अग्रपंक्तिमा छन् । सबैभन्दा ठूलो बेरुजु रकम यिनैका नाममा छ । ठूलो रकम तलब भत्ता सुविधा उपभोग गर्छन्, तर कर तिर्दैनन्, कर तिर्ने मन्त्री र सांसद नगण्य छन् । अधिकांशले सांसद कोष नै हिनामिना गरेका छन् । गरीब, अशक्त र रोगीले पाउनुपर्ने आर्थिक सहायता रकम यिनैले खाएका छन् । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन हरे पनि बाहिरी रकम हिनामिना थाहा हुन्छ । भित्रभित्रै त अरु कति हो कति ? यता जनतालाई झुक्याउन ‘संविधान’को फलाको हाल्छन् । नमूनालायक शासन व्यवस्था भएको बेलायतमा कुनै संविधान छैन । राम्रो काम गर्न संविधान नभएर अड्कदैन । तर यहाँ संविधान बनाउने नाममा बेइमानहरुले अठार अर्बभन्दा बढी उडाइदिए । न संविधान बन्यो, न त अव्यवस्थाकै कुनै उपचार हुनसक्यो । धिक्कार छ । त्यसैले इमानलाई बन्धक नराख्ने हो भने आवश्यक परिमार्जन गरेर अबको संसदले २०४७ कै संविधान लागू गरेर विवाद समाधान गरे हुने हो ।
काम गर्दाका आफ्ना कमी कमजोरी र दोष केलाएर सच्याएर अघि बढ्ने सरकार नै असल सरकार हुन्छ । गर्ने बेलामा देश र जनताको हित विपरीत गर्ने र आफूले जे गरे पनि ठीक मानेर लिसो झैं कुर्सीमा टाँस्सिइरहनेहरु सरकारमा भएपछि दुर्भाग्य हुँदो रहेछ । आज देश र जनता दुर्भाग्यको शिकार भएका छन् । बाहिर संविधानको खुबै प्रचार छ । नेताहरु संविधानप्रिय देखिन खोज्छन् तर यिनलाई संविधान होइन, सत्ता मात्र प्रिय छ । यिनलाई संविधान चाहिएकै छैन । कुन काम यिनले संविधान र कानुन अनुसार गरेका छन् । मन्त्री, सांसद बनेका ज्यानमारा, लुटेराहरु कानुनलाई चुनौति दिएर खुलै हिंडेकै छन्, अझ राज्यले नै सुरक्षा दिएर राखेको छ भने संविधान त देखाउने दाँत मात्रै भएको छ । त्यसैले नेताको अभीष्ट संविधान होइन, उनीहरुको अभीष्ट त कुर्सी र दाम हो दाम । अतः नेता र मन्त्रीले संविधानको स्वाङ गर्नु नै व्यर्थ भैसकेको छ । त्यसमा पनि आजका कम्युनिष्टले त आज अघिका जुनसुकै पूँजीवादी सामन्तलाई पनि उछिनिसकेका छन् । आजका कम्युनिष्टको चुलिएको सम्पन्नताले कम्युनिष्ट गरीबका मसिहा भन्ने कुरालाई मित्थ्या सावित गरिदिएको छ । उनीहरुको गायत्रीमन्त्र अब जसरी हुन्छ शक्ति हत्याउ, लुट, कमाउ, खाउमा गएर थिग्रिएको छ ।
राजनीतिका नाममा अति नै घृणित काम हुनथाले । नेताका काम देख्दा लाजमर्दो भैसक्यो । देशको विग्रदो स्थितिलाई समाल्नेभन्दा अझै विगार्ने सोच देखा पर्दैछन् । सबै कुर्सीकै लागि हत्ते हालिरहेका छन् । सधैं एकैथरिले कुर्सी हत्याउने हो भने दलीय परिपाटी र चुनावको के अर्थ रह्यो ? यो कस्तो प्रजातन्त्र हो कि गणतन्त्र ? बुझिनसक्नु भयो । देशको आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था नै ध्वस्त भैसक्यो । दुनियाँ हसाउने काम मात्रै भएको छ । अर्कैको इशारामा नाचेर देशको मर्यादा रहला ? अब पनि नेताका आँखा नखुल्ने र अशान्ति एवं अव्यवस्थाले निरन्तरता पाइरहने हो भने देशको अस्तित्व संकटमा नपर्ला ? त्यसैले अब त अति भैसक्यो । लाज पनि मान नेताहरु हो ! जनतालाई गरिखान देऊ ।
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)